ဆန်နီနေမင်း: အရိယာဟုတ်မဟုတ် အပြင်သဏ္ဍာန်ကြည့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသလား
အားလုံးကို ကြိုဆိုလျက်ပါ၊ လာရောက်စာဖတ်ကြသူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ နေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးလျက်ပါ။ ဆန်နီနေမင်း
ဆန်နီနေမင်းဆိုတာကတော့ ဦးဇင်းစာရေးတဲ့ ကလောင်နာမည်ကို ပေးထားတာပါ။ ဦးဇင်းအသက်(၂၉)နှစ် ရှိပါပြီ။ 2008-ခုနှစ်မှာ မန္တလေးမြို့၊ သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ B.A ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး 2010-မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်၌ M.A ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ 2011-မှာ M.A အောင်မြင်လို့ ယခု 2012- မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်တွင် Master of Philosophy(M.philဘွဲ့ ဆက်လက်သင်ယူနေပါတယ်။ (05.12.2012) ရက်နေ့မှာ Doctor of Philosophy (Ph.D) ကျမ်းပြုဖြစ်သွားပြီမို့ ကျမ်းပြုနေပါတယ်။ ဦးဇင်းကို ကိုယ့်ညီအကိုမောင်နှမသားချင်းကဲ့သို့ အားလုံးခင်မင်နိုင်ပြီး သိချင်တာရှိရင်လည်း ကိုယ့်မောင်နှမသားချင်းဆွေမျိုးကဲ့သို့ သဘောထားပြီး ခင်မင်စွာနဲ့ မေးမြန်းကြပါ။ ဦးဇင်း လေ့လာထားသမျှ၊ တတ်သိသမျှပညာများသည် အများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်း တတ်သိသမျှကို ပြောပြပေးပါမယ်။ သို့သော် ဦးဇင်းသည် ပိဋကတ်ကျမ်းတတ်ဆရာတော် မဟုတ်သောကြောင့် အမှားများပါလျှင် သည်းခံခွင့်လွတ်ပေးကြပါလေ။ အားလုံးကို ခင်မင်လျက် အရှင်ကောမလ(ခ) ဆန်နီနေမင်း မကုဋာရာမမြန်မာကျောင်းတိုက် ကိုလံဘိုမြို့၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။Ashin KomalaMakutarama Myanmar Temple, Dematagoda road, 284, Colombo 09, Colombo,Sri lanka. Phone- 0094-758320168 sanninaymin@gmail.com
အရှင်ကောမလ ဆန်နီနေမင်းCreate Your Badge
၀က်ဆိုဒ်များဖွင့်ဖတ်ရာတွင် မကျွမ်းကျင်သေးသောသူများ သိရှိရန် ၁။ ဆောင်းပါးပို့စ်တစ်ခုရဲ့ အပြည့်စုံကိုဖတ်ချင်ရင် အဲဒီပို့စ်အောက်က Read more ကို နှိပ်ပါ။
၂။ တင်ထားသောဆောင်းပါးပို့စ်များ စာလုံးသေး၍ စာလုံးကြီးဖြင့် ဖတ်ချင်ပါက Ctrl နှင့် + တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ စာရေးသူတင်ထားသော ဆောင်းပါးပို့စ်များ တစ်မျက်နှာ ဖတ်ပြီးပါက နောက်တစ်မျက်နှာသို့သွားချင်လျှင် ဆိုဒ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Older post ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ comment ရေးချင်လျှင် ဆောင်းပါးပို့စ်ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ comment ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လျှင် comment ရေးစရာဘောက်လေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာရေးပြီးလျှင် PUBLISH YOUR COMMENT ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ ဦးဇင်းရေးသားထားသော စာများကို မည်သူမဆို စိတ်တိုင်းကျ ကူးယူခွင့်ပြုပါသည်။ သို့သော် စာရေးသူ၏ နာမည်နှင့်လိပ်စာကိုတော့ ဖော်ပြသည့်နေရာများတွင် ဆောင်းပါး
"ဓမ္မ၀ီရ အရှင်တေဇနိယနဲ့ လူ(ဘုန်းကြီး)မှားခြင်း" (ဟဒယ)
၂၀၁၃ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်အင်္ဂါနေ့ တရားတော်များ။
THE COMING OF DAYWAW
ပါဠိ Converter (ဖောင့်ပြောင်းလဲ၍ အသုံးပြုနိုင်ရန်)
iPhone 5S တွင်ပါဝင်လာသည့် Touch ID ခေါ် လက်ဗွေဖတ်စနစ် အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
Myanmar Blogger Forum 7th Anniversary
Kp3နည်းပညာ၊၄၉ဝ၊ဘလော့ Tamplate ပြောင်းနည်း
IP Location Finder: IP Locator,
လား​ရှိုး​မြို့ ​လောင်း​က​စား​ရုံ​များ ​ပိတ်​ပေး​ရန် ​မြို့​ခံ​များ ​တောင်း​ဆို
အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်သူ့ ခေတ် ဂျာနယ် အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၉
SHADE Journal | အတွဲ(၇)၊အမှတ်(၉)
အရိယာဟုတ်မဟုတ် အပြင်သဏ္ဍာန်ကြည့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသလား...
(1) http://www.mediafire.com/?sxbqx8g8h5i7cmj (If you want to write Myanmar font on the Desktop you can download this Software.)
(2) http://www.mediafire.com/?zbo8l8slcpu8xkc (If you want to read and write Myanmar font in your computer you can download this Software.)
(3) http://www.mediafire.com/?9oiddikg8cl1ob5 (If you don't ok above (2) software you can download this software.)
ကွန်ပျုတာမှာ မြန်မာလိုထည့်ချင်ပါက အပေါ်က လင့်တွေဖွင့်ပြီး ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျုတာမှာ install မောင်းလိုက်ပါ။ မြန်မာစာများ အလွယ်တကူ ရေးဖတ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။
အရိယာဟုတ်မဟုတ် အပြင်သဏ္ဍာန်ကြည့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသလား
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သာမန်လူများအနေနဲ့ ရဟန္တာစတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို ပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီး ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါမလားဘုရား။ နောက်ပြီး စကားပြောဆိုပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အရိယာဟုတ်မဟုတ်ကို ဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်လားဘုရား။ ယခုခေတ်လူတွေ ဘယ်လိုကြည့်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့သမုတ်ကြလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဘုရား။ အရှင်ဘုရား အဆင်ပြေတဲ့ချိန် စာပြန်ပေးပါဘုရား။
အရိယာဖြစ်တဲ့ သံဃာတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို အရိယာဖြစ်ရင်လည်း လူများကို အရိယာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင် ပါစိတ်အာပတ်သင့်ကြတာမို့ မပြောဆိုကြပေ။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်အရိယာမဟုတ်ဘဲ အရိယာလိုပြောရင် အဲဒီသံဃာဟာ ပါရာဇိကအာပတ်သင့်လို့ ရဟန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သံဃာများအနေနဲ့တော့ အရိယာဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ပြောဆိုကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
အပြင်သဏ္ဍာန်နဲ့စကားပြောဆိုပုံတို့ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သံဃာဟာ အရိယာဟုတ်မဟုတ်ကို သိရှိဖို့ရန် အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဟန္တာဖြစ်တဲ့သံဃာများမှာ ၀ါသနာဆိုတဲ့အကျင့်စရိုက် ရှိနေသေးတာမို့ ပုထုဇဉ်အမူအရာများ ရှိနေတတ်သေးလို့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ရှင်ပိလိန္ဒ၀စ္ဆရဟန္တာမထေရ်ဟာ အရင်ဘ၀တွေက ပုဏ္ဏားဘ၀မှာဖြစ်လာသူမို့ မာန်မာနပြင်းထန်တဲ့ ၀ါသနာပါလာတဲ့အတွက် လူမြင်တိုင်း ကြမ်းတမ်တဲ့စကားနဲ့ ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ရှင်ပိလိန္ဒ၀စ္ဆမထေရ်ကို ရဟန္တာမှန်မသိလို့ မုသားစတဲ့ မဟုတ်မမှန် မလေးမခန့် စကားများပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပြီး အရိယာဖြစ်တဲ့ အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးဟာ သူ့သမီးအရိယာဖြစ်တာ မသိခဲ့တာကို ထောက်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင် သာမန်လူများအဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အရိယာဟုတ်မဟုတ် သိဖို့ရန် ခဲယဉ်းလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပြင် အရှင်မဟာကဿပရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီး တောကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးတဲ့အချိန်တုန်းက သူရဲ့အလုပ်အကျွေးဥပါသကာတစ်ယောက်ဟာ မထေရ်နောက်က လိုက်နေရပေမဲ့ အရှင်မဟာကဿပမထေရ်ကို ရဟန္တာမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်နေ့ မထေရ်နောက်ကနေ သပိတ်ကိုင်ပြီး လိုက်ရင်းနဲ့ “ငါသည် ဤလောကတွင် ရဟန္တာဟု ကျော်စောသူများ ခဏခဏ ကြားဖူးပေမဲ့ ရဟန္တာဆိုတာကို မမြင်ဖူးသေးဘူး”လို့ ပြောဆိုခဲ့တာကို သာသနာလင်္ကာရစာတမ်းတွင် ဖတ်ရတဲ့အတွက် အပြင်သဏ္ဍာန်နဲ့စကားပြောဆိုပုံကိုကြည့်ပြီး သာမာန်လူများအနေနဲ့ အရိယာဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ရန် ခံယဉ်းတယ်ဆိုတာ ခုရေးပြခဲ့တဲ့ သာဓကတွေကိုထောက်ဆကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိမိနဲ့အနေနီးသူများဖြစ်ရင်တော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာအဆင်း၊ အနေအထိုင်တို့ကိုကြည့်ပြီး တရားထူးရမရဆိုတာကို ခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ တရားထူးရလာရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ကြည်လင်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားမှုကလည်း နဂိုလိုမဟုတ်ဘဲ ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က သားရဟန်းတရားထူးရလာတာကို မိခင်ဖြစ်သူက သူ့သားရဟန်းရဲ့ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်နဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီး သိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်လောင်းဖြစ်တဲ့ ဥပတိဿ တရားထူးရလာတာကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရှင်မောဂ္ဂလန်မထေရ်လောင်း ကောလိတက ဥပတိဿရဲ့ မျက်နှာနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီး သိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် တရားထူးရမရ၊ အရိယာဟုတ်မဟုတ်ကို ခေတ္တခဏအပြင်မှာတွေ့ရုံနဲ့ ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ရန် ခဲ့ယဉ်းတယ်လို့ ခုပြောပြခဲ့တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက် သာဓကတွေကို ထောက်ဆကြည့်ရင် သိနိုင်သလို မိမိနဲ့အနေနီးသူများဆိုရင်တော့ တစ်ပါးသူရဲ့ ရုပ်ဆင်းလှုပ်ရှားမှု တမူထူးခြားမှုတို့ကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်စီစစ်သုံးသပ်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မေးခွန်ရှင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဦးဇင်းရသမျှအချိန်လေးမှာ ဦးဇင်းသိသမျှ ဖြေကြားပေးရင်း စာဖတ်သူများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကာ ပန်းတိုင်ကိုလျင်မြန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်…..။
ဆန်နီနေမင်းFree Wordpress Themes and Free Blogger Templates by TNB Popularized by Watch Tv Shows Online. Unblock through myspace proxy unblock, Songs by Christian Song Chords